Inona no Tokony ho Fantatry ny Mpitsabo?
Tahaka ny amin'ny sehatry ny fianarana, dia manampy amin'ny fanombohana ny fianarana aloha ny fototra raha te-hanapaka azy ireo ianao. Ho an'ny olona iray izay nanapa-kevitra fa te-hianatra ny momba ny physique, dia mety misy faritra tsy azony atao amin'ny fianarana aloha izay hahatsapany fa mila mahazatra azy ireo izy. Ny zavatra manan-danja indrindra ho an'ny mpitsikera iray fantatry ny olona dia nofaritana etsy ambany.
Fizika ny fizika ary toy izany, dia zava-dehibe ny hampiofanana ny sainao hiomanana amin'ireo olana atrehiny.
Ity ny fanofanana ara-tsaina sasantsasany izay ilain-drizan'ireo mpianatra mba hianatra tsara ny fizika, na ny siansa - ary ny ankamaroan'izy ireo dia fahaizana tsara tsy maintsy atao, na inona na inona saha entinao.
Ilaina tokoa ny hahatonga ny physicist ho matotra amin'ny matematika. Tsy mila mahafantatra ny zava-drehetra ianao - tsy azo tanterahina izany - fa mila miala amin'ny hevitra matematika sy ny fomba fampiharana azy ireo.
Raha te hianatra momba ny fizik ianao dia tokony handray ny sekoly ambony sy ny matematika amin'ny oniversite ianao, araka izay azonao atao. Indrindra indrindra, alao ny fandaharam-pianarana algebra, geometry / trigonometry, ary fandaharam-pampianarana azo alaina, anisan'izany ny fianarana Advanced Placement raha mahafeno fepetra.
Matetika ny matematika dia matematika ary raha hitanao fa tsy mitovy amin'ny matematika ianao, angamba te hanaraka ny safidy fianarana hafa ianao.
Olana amin'ny famahana olana sy ny siansa
Ankoatra ny matematika (izay endrika endrika hamaha olana), dia manampy amin'ny mpianatra matotra ara-batana ny fahalalana fahalalana ankapobeny momba ny fomba hiatrehana olana ary hampihatra hevitra ara-lojika mba hahatongavana amin'ny vahaolana.
Ankoatra ny zavatra hafa, tokony ho fantatrao ny fomba siantifika sy ny fitaovana hafa ampiasain'ny physicists. Halalino saha ara-tsiansa hafa, toy ny biolojia sy ny simia (izay mifandray akaiky amin'ny physique). Avereno indray ny fianarana ambony raha toa ka mahafeno fepetra ianao. Ny fandraisana anjara amin'ny seho ara-tsiansa dia atolotra, satria tsy maintsy manana fomba fitsaboana fanontaniana ara-tsiansa ianao.
Amin'ny lafiny iray, afaka mamantatra ny famahana olana amin'ny sehatra tsy siansa ianao. I dia mampiavaka ny fahaizako mamaha olana mahomby amin'ny Boy Scouts of America, izay matetika aho no nieritreritra haingana mba handaminana toe-javatra iray izay hitranga mandritra ny fitsangatsanganana an-dalamby, toy ny hoe ahoana no ahafahan'ireo tranolay adala hijanona ho marina amin'ny oram-baratra.
Vakio amin'ny fomba diso ny lohahevitra rehetra (anisan'izany ny siansa). Manaova piozila lojika. Mizaha ny ekipa adihevitra. Mialà sasatra na lalao video miaraka amin'ny singa mahomby.
Ny zavatra rehetra azonao atao mba hampiofanana ny sainao handamina ny angon-drakitra, hitady lamina, ary hampihatra ny fampahalalana amin'ny toe-javatra sarotra dia ho sarobidy amin'ny fametrahana ny fototry ny fisainana ara-batana izay takinao.
Mampiasa fitaovana teknolojia, indrindra ny ordinatera, ny mpanao fanatanjahan-tena mba hanatanterahana ny fandrefesana sy ny fanadihadiana momba ny angona siantifika. Noho izany, mila mahazo aina amin'ny ordinatera sy ny endrika teknolojia samihafa koa ianao. Na dia farafaharatsiny aza, tokony ho afaka hametaka ordinatera sy ireo singa samihafa ianao, ary koa mahafantatra ny fomba hananana amin'ny alalan'ny rafitra ordinatera ahafahana mahita tranaitra. Mahasoa ny famakafakana ny fampiasana ordinatera.
Zavatra iray tokony hianaranao dia ny fomba fampiasana tabilao hanamboarana data.
Indrisy anefa, niditra tao amin'ny oniversite tsy nisy io fahaiza-manao io ary tsy maintsy nianatra izany tamin'ny daty fanaovana tatitra momba ny tatitra momba ny lohako. Ny Microsoft Excel no fandaharam-pivoarana mahazatra indrindra, na dia mianatra ny fomba fampiasana iray izay azonao atao amin'ny ankapobeny mora foana. Ampahafantaro ny fomba fampiasana ny formula ao amin'ny spreadsheet mba haka ireo vola, averina, ary hanao lahatra hafa. Ankoatra izany, mianatra ny fomba fametrahana angon-drakitra ao anaty tabilao ary mamorona grafofa sy tabilao avy amin'io tahiry io. Minoa ahy, ity dia hanampy anao amin'ny manaraka.
Ny fianarana ny fomba fiasan'ny milina dia manampy ihany koa ny manome hevitra amin'ny asa izay ho tonga amin'ny sehatra toy ny electronics. Raha fantatrao ny olona iray tafiditra ao anaty fiara dia asaivo manazava aminao ny fomba fandehany, satria maro ireo fitsipika ara-batana fototra no miasa ao anaty motera fiara.
Fomba fianarana tsara
Na ny mpilalao matihanina tena mahay indrindra aza dia mila mianatra.
Nitory tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa aho, nefa tsy nianatra be izany, ka nianatra ela be aho. Ny mari-pahaizana ambany indrindra amin'ny oniversite dia ny semester-n'ny seminera voalohany, satria tsy nianatra mafy aho. Na izany aza, dia nitazona izany aho, ary nanampy ahy tamin'ny fikarakarana ara-batana, saingy naniry mafy ny hanana fahazarana mianatra tsara kokoa aloha aho.
Mitodiha any am-pianarana ary manaova fanamarihana. Avereno jerena ny fanamarihana rehefa mamaky ilay boky, ary asio marika fanampiny raha toa ilay boky dia manazava zavatra tsara kokoa na hafa noho ilay mpampianatra. Jereo ireo ohatra ireo. Ary ataovy ny devoaranao, na dia tsy voamarina aza izany.
Ireo fahazarana ireo, na dia mora kokoa amin'ny sehatra tsy ilainao azy ireo aza, dia afaka manampy anao amin'ireo fianarana manaraka izay ilainao azy ireo.
Amin'ny fotoana iray amin'ny fianarana fizik, mila mila mijery fisainana lehibe ianao. Mety tsy handresy loka Nobel ianao. Azo antoka fa tsy hantsoina hiditra amin'ny sehatry ny fahitalavitra ao amin'ny Discovery Channel ianao. Raha manoratra boky ara-batana ianao, dia mety ho lahatsoratra iray ihany no ahafahana mividy olona 10 eo ho eo eto amin'izao tontolo izao.
Ekeo ireo zava-drehetra ireo. Raha mbola te-ho mpitsabo ianao, dia ao amin'ny ranao izany. Ataovy. Amboary izany. Iza no mahalala ... mety ho azonao io loka Nobel io.
Fitsipika ho an'ny Taomba Maningana toy ny vanim-potoana sy ny fahasalamana
Aiza no misy ny fôlôpô ny Tontolon'ny Periodika?
Ny tena endrika ny Raindrops
Inona no atao hoe tarika fitantanana?
Inona no atao hoe pH?
Ireo karazana hery mpanafika
Fotsy Fotsy Fotsy Fotsy
Fahatakarana fiara voafantina nomena alalana
Torohevitra manan-danja 12 hiarovana ny tenanao amin'ny cyberstalking
Ahoana ny fomba fampiasana baomba mandehandeha
Teny nalaina tao amin'ny Shakespeare Plays
Tantara avy amin'ny hira Folk 'Scarborough Fair'
Toro-hevitra momba ny fanontana momba ny varotra sy ny iraka
Inona no atao hoe fantsom-pandrosoana?
Loharanom-pitaovana ho an'ny mpanompo sampy Romanina
Lisitra Lisitra Afrikana ho an'ny firenena Afrikana rehetra
Ataovy fofona amin'ny polisy mainty hoditra
10 Fanontaniana Angatahana Mpirotsaka An-tserasera An-tserasera
Vanim-potoanan'ny chalcolithique: ny fiandohan'ny metaly metaly
Arnold Schwarzenegger manao vazivazy
Vavaka iray hitenenan'ny zatovolahy
Ny rakitra Master Death
Fanamafisana ho fanamafisana: tsy fahampian'ny fisainana sy ny fanadihadiana
Scam: Video Fampitandremana mikasika ny Shampoo
Famaritana samirery sy teoria